Movistar + Lite yemahara mwedzi mumwe weiyo Coronavirus, nakidzwa paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Sezvo imi mese muchiziva, iyo Coronavirus yakaziviswa sedenda. Vhiki rapfuura vakakurudzira kuti tirege kuungana pamwe chete, asi mushure memazuva mashoma vakatiudza kuti tigare pamba kuitira kuti tisabatsire mukupararira kweutachiona. Mumasocial network, akaita seTwitter, hashtags dzakadai se #QuedateEnTuCasa dzakatangwa uye kune makambani mazhinji ebasa anoda kutibatsira kuita kuti nguva yakaoma iyi itakurike. Pakati pemakambani aya pane Movistar, uyo anotipa iyo yayo Movistar + Lite yemahara kusvika Kubvumbi 30.
Chinhu chakanakisa nezve ino "kupihwa", kuidaidza neimwe nzira, ndeyekuti ndizvo inowanikwa kune vashandisi veMovistar uye kune avo vasipo. Panongova nechirambidzo chimwe chete: iwo makanera haasati awedzerwa kudhisheni yekambani uye inofanira kuwanikwa kubva kuapp (nhare kana Smart TV) kana kubva pawebhu webhu. Pano tinotsanangura manakiro atinoita sevhisi iyi kuti, zvinofanirwa kutaurwa, isu tinosarudza kuti zvainge zvisina basa.
1 Maitiro ekumisikidza Movistar + Lite
2 Ndedzipi nzira dzandinogona kutarisa panguva ino
Maitiro ekumisikidza Movistar + Lite
Kana uri Vashandisi veMovistar +, matsva matsva anoonekwa izvozvi mukushandisa. Kana iwe usina icho chaimbozivikanwa seYOMVI chakaitwa, iwe unongofanirwa kutevedzera ruzivo iwe rwaunaro pane yepamutemo Movistar peji iyo iwe yaunogona kuwana kubva pano. Vaya venyu vasiri vatengi veanozivikanwa opareta vanogona kuwana sevhisi nekutevera aya matanho:
Iwe unofanirwa kuenda kune ino webhusaiti uye kunyoresa: https://www.movistar.es/particulares/Aplicaciones/ProcesosCompra/movistarplusLite.
Nhanho inonyanya kukosha yatotorwa. Ikozvino kune mukana webasa, chimwe chinhu chatinogona kuita mu:
Nhare mbozha: for Android y ye iOS.
Smart TV App. Pano iwe unofanirwa kuzvitsvaga mune yekushandisa chitoro cheterevhizheni inoshanda sisitimu, chero bedzi iripo, kana kuiwana iyo kana yaive yatove yakaiswa nekutadza.
Famba sevhisi kuburikidza newebhu: http://ver.movistarplus.es.
Chekupedzisira, nekuti musoro wenyaya hausi "clicbait", taura kuti vashandisi veLinux havazokwanise kuwana sevhisi kana tikasaita mashoma ekuwedzera matanho:
Kana tisina Google Chrome yakaiswa, tinoiisa (isingaenderane neFirefox).
Isu tinoisa ichi chiwedzero: Mutambi kuti aone Movistar +.
Zvino hongu, isu tinozvizivisa pachedu nehunyanzvi hwatakazadza nhanho 1.
Ndedzipi nzira dzandinogona kutarisa panguva ino
Mikana ine zvirongwa zvevaraidzo, kuseka, nyaya kubva kune imwe nzvimbo yekuona uye zvinyorwa, pakati payo iri National Geographic, Odyssey kana iyo Nhoroondo chiteshi.
Mitambo yemitambo, senge maviri kubva kuEurosport.
Saka ikozvino unoziva: #Gara mumba mako Uye, ini handisi kuzoti unonakidzwa nazvo, asi uve nenguva yakanaka neMovistar + Lite.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Movistar + Lite yemahara mwedzi mumwe kune wese munhu nekuda kweCoronavirus, saka unogona zvakare kunakidzwa paLinux
Kusvikira vajairira webhu ini handibhadhare yakawanda.Ndave nemwedzi yakati wandei uye handifarire kushandisa chrome.
Ini ndinoshanda muMovistar technical Attention Center uye dzimwe nguva pane kukundikana pano ndiyo mhinduro.
Kana paunenge uchiedza kuwana Movistar + pamidziyo iri pachiratidziro chikanganiso "WebGL isingatsigirwe" ichiratidzwa, unogona kuedza kuita chinotevera chiitiko kuti uigadzirise:
1.Pinda Chrome marongero kubva kubhurawuza rako Mune epamberi magadziriso gonesa sarudzo "Shandisa Hardware kumhanyisa painowanikwa"
2.Svika Chrome Mireza chrome: // mireza / uye gonesa zvinotevera zvinowedzerwa:
WebGL Draft Extensions (Ichakukumbira iwe kuti utangezve iyo browser-ok)
Kuwedzeredza software kupa runyorwa (Ichakukumbira iwe kuti utangezve iyo browser-ok)
Uye isu vedu vasiri vanobva kuSpain, chii?
Zvakanaka, zviri pachena kuti haugone kuwana sevhisi kuSpain chete.
DDR4 inoramba iri panjodzi yekurwiswa neRowHammer kunyangwe paine imwe dziviriro
Yemahara software uye dambudziko. Kubata yambiro dzekukurumidzira